Anofara Mahoridhe kubva kuna Janma Gene!
Post nguva: 12-25-2020
2020 rave riri gore risinganzwisisike, rinotongwa nematambudziko matsva uye kusagadzikana kwakanyanya. Kuranga, kuremekedza vamwe pamwe nekubatana zvave zvakakosha gore rino kupfuura nakare kose. Nekuzvipira kunoshamisa kwevashandi veJanma Gene, isu takachengetedza mashandiro edu asina kumiswa uye tine ...Verenga zvimwe »
Iyo nucleic acid bvunzo inopedzwa mumaminitsi makumi mana!
Post nguva: 12-18-2020
"Janma gene" ine maviri akasarudzika nucleic acid yekutsvaga tekinoroji mapuratifomu (isothermal nucleic acid yekuona chikuva, ASEA nucleic acid yekukurumidza kuona chikuva), Zvigadzirwa zvakagadzirwa zvichibva papuratifomu izvi zviri nyore, zvinokurumidza, zvakanyanyisa, Kukwirisa uye humwe hunhu ...Verenga zvimwe »
Iyo inorasika hutachiona sampling chubhu yaJanMa Gene iri kutengeswa kupisa!
Post nguva: 12-08-2020
Mazhinji eakajairika maitiro ekuchengetedza hutachiwana ane guanidine munyu (guanidine isothiocyanate kana guanidine hydrochloride), ayo akajairika mapuroteni denaturants esero lysis panguva yenucleic acid kuburitsa, uye inogona zvakare kumisa mavhairasi. Nekudaro, guanidine munyu system haigone p ...Verenga zvimwe »
Iyo fluorescent yakawandisa PCR chiridzwa (ND360) chakagadzirwa na "JanMa gene" chakawana CE chitupa!
Post nguva: 12-03-2020
Munguva pfupi yapfuura, iyo fluorescent yakawandisa PCR chiridzwa (ND360) chakagadzirwa na "JanMa geni" chawana CE chitupa, icho chinoratidza kuti iyo nucleic acid yekutsvaga system yeJanMa geni yakazivikanwa nenyika dzakabudirira muEurope uye yawana zororo rekutengesa mhiri kwemakungwa. Kubva kuburitswa ...Verenga zvimwe »
Qingdao Jianma Gene Technology Co, Ltd. zvigadzirwa zvekurapa kutanga 2020CACLP, akawanda nucleic acid anokurumidza bvunzo zvigadzirwa zvinoshamisa kutaridzika!
Post nguva: 11-13-2020
Kubva muna Nyamavhuvhu 21 kusvika 23, CACLP, yegumi nenomwe International Laboratory Medicine neRopa Transfusion Instrument uye Reagent Fair, yakabudirira kuitirwa muNanchang Greenland International Expo Center. Mazana emazana emabhizimusi kubva kune ese indasitiri cheni ye in vitro diagnostics (IN vi ...Verenga zvimwe »
Qingdao Jianma Gene Technology Co, Ltd. Ini coVID-19 nucleic acid bvunzo reagent yakaverengerwa mune chena runyorwa rwekunze mabhizinesi emakemikari echirwere chekudzivirira zvinhu muChina!
Post nguva: 11-11-2020
Musi waApril 25, 2020, iyo Ministry of Commerce, iyo General Administration yetsika neHurumende Kutarisirwa kwekutarisirwa kwemusika uye manejimendi yeRepublic of China yakapa Chiziviso Nha.Verenga zvimwe »
Nucleic acid yekuona yenoverengera coronavirus yeQingdao Jianma Gene Technology Co, Ltd. inosimbiswa neEC.
Nucleic acid yekuona yenoverengera coronavirus yeQingdao Jianma Gene Technology Co, Ltd. inosimbiswa neEC. Musi waKurume 13, iyo COVID nucleic acid bvunzo kit (Rapid PCR fluorescence nzira) yeQingdao Jianma Gene Technology Co, Ltd., chikamu chevaridzi cheQingd ...Verenga zvimwe »
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved. Canine Parvovirus (Cp), Rapid Nucleic Acid Kubvisa Kit, Kubvisa-Mahara Kit, China Rapid Bvunzo Kits,